ekhaya > Ukuhamba eYurophu > Kutheni Uloliwe yenye eyenzwe Modes yokuhamba
Business ahambe ngetreyini, Uhambo loLoliwe, Ukuhamba eYurophu
Le polemic on ukuqeqesha xa kuthelekiswa ibhasi eYurophu ke isihloko uphelayo, wonke umntu unoluvo lwakhe. kodwa, Ingaba nokuba sithetha ngokhuseleko, kwaye ukuba ngaba - ngaba kwanele? Ukhuseleko lwezothutho esizikhethileyo kufuneka luhlale lufika kuqala, kwaye sijongana nayo namhlanje. ngokwesiqhelo, abantu badla ukuya ngalo sihloko ngokwahlukileyo, kuxhomekeke ukhetho zabo zokuhamba ngayo. Ngokubhekele phaya, iindaba zakutshanje siyeva malunga neengozi ehlabathini factor kwihlabathi, njengokuba. Nangona uya kunqabile ukuba uve kwakukho kwingozi kaloliwe ethile, iyenzeka. Kanye njengoko enza umoya, imoto, ibhasi kunye nezinye iindlela zothutho. Nangona kunjalo, manani icacile - ngokusemthethweni, uloliwe yenye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba kule mihla! Inqanaba elifanayo lokhuseleko liya kwizithuthi zomoya ngelixa zonke ezinye iindlela zothutho ziza emva.
Nguloliwe oyenye yezona ndlela ziKhuselekileyo zoThutho kuwo onke amazwe?
Hayi, ayiyo. Asizizo zonke komzila kunye noololiwe abo umgangatho ofanayo. Xa sithetha kaloliwe ngokhuseleko zokuhamba, sidla sithethe ngayo kwimeko kwilizwe elithile. Ngokubanzi, uhambo ngololiwe kuba ikhuseleke kakhulu, kodwa ayisenabungozi ukujonga imeko yeziporo zelizwe kunye nokunxibelelana ukuba ufuna ukuhamba ngololiwe.
Xa zikaloliwe kunye noololiwe zithathwe ngokwaneleyo unonophelo (ngamanye amazwi, njalo izidingo, zigcinwe, indawo xa kuyimfuneko, njl), uya kunqabile wakha ubungqina naziphi na iingozi kunye le ndlela zokuhamba. Esinye sezizathu kukuba, ngokungafani kuhambiso endleleni, kukho indlela enye kunye neendlela zokuhamba (ngamanye amazwi, uloliwe) elandelayo indlela enye kwindawo yayo yokugqibela. Akukho zimoto ezingalindelekanga ziyeza indlela yakho, ngokwenza uphelelwa ulawulo phezu ivili. Akukho iinguqu ngesiquphe avule, okanye ezinye iimeko ezicinezelayo nezinokuba yingozi. Lo isenokuba sesinye sezizathu zokuba uthutho ngololiwe kuseyinto enye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba ukuze kude.
Ukuba ukuthelekisa kaloliwe kunye kwendlela yothutho ngomoya, Singabonisa ngokulula ukuba uloliwe yenye yeendlela ezikhuselekileyo zothutho kodwa nokunye okuninzi ezinzileyo kunayo nayiphi na enye indlela yokuhamba. Njani? Oololiwe musa ukuvelisa ezininzi kwekhabhoni CO2, kunye nemisi uloliwe azikhutshwa ngqo emoyeni ephezulu. Ukongeza, oololiwe musa osebenzisa amandla okanye indawo kakhulu, kwaye izinga ingxolo zimbalwa ngaphezu kwezinye iindlela zokuhamba. Uninzi lwabakhweli abazi-eco bakhetha oololiwe ukuba babe yindlela yabo yokuhamba. Abahambi emhlabeni Europe, kakhulu, umthande eco-ubuhlobo koololiwe kunye iingxelo zazo zokhuseleko.
Nandipha imisebenzi yolonwabo phakathi kwamanqaku A no-B. Indlela kwakuhle nelokuphumla ukufumana wena ngaphandle olubi
Kule mihla, xa wonke eyayisebenza kwaye exhumaxhuma esihlalweni emotweni yabo kwazo emsebenzini and vice versa, ukuba nexesha lokuphola phakathi kubalulekile. Ukuba ithuba lokuphumla kuloliwe njengoko ukuhamba yenye yezizathu ezininzi zokuba abantu bakhetha oololiwe.
Ethetha koololiwe-elide umgama, bazi a ukhetho kumnandi ukuya njengoko uvumele esiphansi. Ukufumana ukusuka A ukuya kwindawo B 2 iiyure ngendiza zisebenza kakuhle, kodwa kukhuselekile ukuba impilo yakho? Ngaba umngeni post yethu blog “Uloliwe yenye eyenzwe Modes yokuhamba”? Ngaba unakho umzimba nengqondo ukuprosesa ukutshintsha kwemozulu ngesiquphe, Uxinzelelo lomoya, nayo yonke enye into phakathi? Lutho. Le nto bekuhamba ukuqeqesha emhlabeni Europe ivumela umzimba wakho ukuba uqhelane notshintsho kwaye uluqhubele phambili ngendlela enempilo.
impahla (Ukhuseleko) benefits
Ngqo impilo okanye ukhuseleko inzuzo, kodwa ukhuseleko imithwalo idlala indima entle ebalulekileyo abanye abakhweli. Kungakhathaliseki ukuba ukukhanya pack lokuhamba okanye hayi, ufuna imithwalo yakho enye. abahambi abaninzi abaqokeleli nezinto zakudala ezixabisekileyo, imifanekiso yezinto, imiqulu, njl. kwaye bona bafuna iinkumbulo zabo kunye nabo. Ngelishwa, uhambo ngomoya waziwa imithwalo ezilahlekileyo ezonakeleyo kunqabile ukuba yenzeke xa uhamba ngololiwe. Ukongeza, imithwalo wakho uhlala kunye nawe, ukuze kungabikho bani unokuzixhwila ngayo umthwalo. Ingaba oku isizathu ukuba uloliwe yenye iindlela ezikhuselekileyo yokuhamba? Sicinga ngoko.
#imowudi	#ekhuselekileyo	#ukhuseleko	#zokuhamba
Uhambo loLoliwe, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
Qeqesha uhambo eNorway, Ukuhamba eYurophu